ပန်းသီး၊ဖရဲသီး၊သင်္ဘောသီး၊လိမ္မော်သီးတို့၏လုပ်ဆောင်ချက် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Health & Fitness » ပန်းသီး၊ဖရဲသီး၊သင်္ဘောသီး၊လိမ္မော်သီးတို့၏လုပ်ဆောင်ချက်
Posted by nyimalay on Feb 9, 2011 in Health & Fitness |7comments
အစာလဲဆေး ဆေးလဲ အစာဆိုတဲ့ ဆိုရိုးနဲ့အညီ ပိစကွေးတို့ ပတ်ဝန်းကျင်မှာ လွယ်လွယ်ကူကူ ရနိုင်တဲ့ အသီးတွေထဲမှာ ဆေးဘက်ဝင်တဲ့ အသီးတစ်ချို့အကြောင်း ဖော်ပြချင်ပါတယ်.. အဲ့ဒီ့အသီးတွေကို ပုံမှန် စားသုံးခြင်းအားဖြင့် ကျန်းမာရေးအတွက် အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေ ရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့် ဘယ်လိုအသီးတွေက ဘယ်လို အကျိုးရှိစေတယ် ဆိုတာလေး တွေကိုဖောာ်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
အသီးတွေထဲမှာ ပန်းသီးကို ပိုကြိုက်တယ်။ အရမ်းစားရင် ၀ိတ်ကျတယ်လား ကွေးကွေး ဒါဆို ပိန်တဲ့သူတွေ စားသင့်ရဲ့လားဟင်
စားသင့်ပါတယ်မမရဲ့…. ဘာလို့လည်းဆိုရင် ပန်းသီးက ၀ိတ်ကျစေတာမဟုတ်ဘူးလေမမ….. အမျှင်ဓာတ်များတော့ စားချင်စိတ်ကိုထိန်းပေးတာ…. ဒီတော့ ပိန်တဲ့သူတွေစားလည်း ၀ိတ်ကကျသွားမှာမဟုတ်ဘူးလေမမ…… အစိမ်းရောင်ပန်းသီးတွေကတော့ ၀ိတ်ကိုပါကျသွားစေတယ်မမ…. နဲနဲလည်းချဉ်တယ်လေသူ့အရသာက……. အနီရောင်ပန်းသီးကတော့ ၀ိတ်မကျစေပါဘူးမမ….
ပိစိကွေးကတော့ အသီးအနှံ ဆိုလာထား အကုန်ကြိုက်တယ် လုံးဝမငြင်းဘူးသိလား….
ဒါဆိုရင် ပိစိကွေကို၊ ငရုတ်သီးစပ်စပ်လေးနဲ့ ရှောက်သီးသုတ်ကျွေးပြီး ရေငတ်လာရင် ရှောက်သီးရယ်၊ မန်ကျည်းသီးရယ် ရောပြီး ဖျော်တိုက်မယ်၊
အော်…..စေတနာတွေစေတနာတွေ…. ဟင့်…. တိုတိုအင်ကမှ ကျွေးတော့လဲ ညီမလေးကစားရမှာပေါ့လေ….
ရှောက်သီးကိုငြုပ်သီးစပ်စပ်လေးနဲ့ကျွေးတာဘာမှမဖြစ်ပေမယ့် ရှောက်သီးနဲ့မကျည်းသီး ရေရောဖျော်တိုက်တာကတော့ ရက်စက်လွန်းပါတယ် …….. :cry
သပျစ်သီး ဖရဲသီး စတဲ့ အအေးဓါတ် များတဲ့ အစားတွေကို လူကြီးများ ညဘက် စားပြီးရင် ကျောရင်အောင်တဲ့ ဝေဒနာ ခံစားရတတ်ပါတယ်။ လေထတာ ဖြစ်ပါတယ်။
အိမ်အောက်ထပ်မှာ နေတဲ့ အဘိုးကြီး ဖရဲသီး စားပြီး ညဘက်ကြီး ဆေးရုံ တင်လိုက်ရတယ်။
မြန်မာပြည်မှသစ်သီးများသည် ဓာတုဆေးဝါးများဖြင့် ပြုပြင်ဖန်တီးထားခြင်းများပါသည်။
ဖရဲသီးရဲ့ အဖြူပိုင်းကတော့ ကျောက်ကြေတယ်နော်